आयुक्तको आवासमा खटिनेलाई पनि निर्वाचन भत्ता ! - Nepal Samaj
आयुक्तको आवासमा खटिनेलाई पनि निर्वाचन भत्ता !
२५ पुष, २०७८Nepal Samajमुख्य समाचारनिर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन
काठमाडौं। निर्वाचन आयुक्तको घरमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत निर्वाचन भत्ता दिनेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तय भएको पाइएको छ । सुरु तलब स्केलको १५० प्रतिशत भत्ता दिनेगरी त्यस्तो कार्यविधि तय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सेवा करारका कर्मचारी, सचिवको निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निर्वाचन तोकिएको मितिबाटै भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई सञ्चार सुविधा पनि हुनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले भने निर्वाचन आयोगको काम–कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अधिकृतको असन्तुष्टिबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पुस ५ गते सातवटै प्रदेशमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत रहनेगरी सात जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट